Booliska Somaliland Waa saaxiibada Bulshada Somaliland | hogaanka.org
Hadii aynu dul marno guud ahaanba taariikhda boolisku waa mid aad qadiimi u ah waxaana ciidamo boolis markii ugu horeyey abuuray dalka Masar (Egypt) 3000 BCE. Ka dib boqortooyadii waxay u qaybisay 42 qaybood oo awood maamul waxaana maamulkasta Fircoon(pharaoh) u magacaabey sarkaal masuul ka ah cadaalada( Justice) iyo nabadgelyada (security). Eareyga police waxaa kuu ka soo jeedaa ereyga polis ee Giriig ah macnahiisuna waa magaalo(city).
Taariikhda ciidamad booliska ee caalamka ma ah mid maqaal kooban lagu soo koobikaro sidaa awgeed hadii aynu intaa ku dhaafno taariikhada booliska, aynu u guda galno shaqadooda iyo muhiimada ay u leedahay bulshada caalamka guud ahaan.
Boolisku sida caadiga ah waxaa uu masuul ka yahay sugida nabadgelyada iyo ilaalinta kala dabeenta ,fulinta sharciga iyo ka hortaga dambiyada, raadinta iyo baaritaanka falal dambiyeedyada.
Sidaa darteed boolisku waa kuwo shaqo aad u muhiima u haya bulshooyinkooda ama dalkooda, shaqadaa oo ah mid naf hurid ah oo mar walba askariga booliska ahi ka fakirayo sidii uu u caawin lahaa qof dhibaateysan.
Halkaas ayaad ka garan gartaa hawsha uu qarankiisa u hayo qofka booliska ah sidaa darteed mar walba waxaa la gudboon qof kasta oo inaga mid ahi in uu gacan siiyo booliska iyo hawlahooda.
Boolisku waa saaxiibka bulshada waxaana mar walba ka dhexeeya bulshada iyo booliska wada shaqayn iyo istixgelin waayo waxay wada ilaalinayaan nabada.
Hadii aan dib u eego Booliska Somaliland waa kuwo ku amaanan kaalinta ay kaga jiraan nabada,waxayna wada shaqayn wanaagsan la lee yihiin bulshada taasina waa mida suura gelisay in nabadgelyada magaalooyinka Somaliland noqdaan kuwo si fiican lays kugu haleyn karo nabadooda.
Muwaadiniyiinta Somaliland waxaan ku buurinayaa iney booliska kala shaqeeyaan nabad, iyo howlahooda waana in aynu iska ilaalinaa in ciidamada booliska ka qorno warar been ah oo aaney waxba ka jirin sideedaba beentu waa dhaqan xun oo aan Allah(swt) inooga digey, waxaanan saxaafada iyo dadka wax qora kula dardarmayaa iney iska hubiyaan wararka ay qorayaan sugnaashahooda.
← Taliyaha Booliska Oo Beeniyey In Ciidanku Qabteen Rag Laga Shakiyay Iyo Hub
Filim Documentry ah oo Somaliland dib u heshiisteedii ka hadlaya Q.3aad →